Umthombo ongenamkeleko woLonke uVimba
Abafundi baseMahayana Buddhism banokuzikhubekisa ngenxa yegama elithi "indlu yokugcina (okanye nje" ivenkile ") ingqalelo" okanye "alaya-vijnana" ngezikhathi ezithile. Inkcazo emfutshane ye-"storagehouse conscious" yinto yokuba isithintelo seentlobo zamava adlulileyo kunye nesenzo se-karmic. Kodwa kukho ngaphezu kwayo.
Igama lesiSanskrit elithi alaya ngokwezwi nezwi lithetha "yonke indawo," ebonisa isiseko okanye isiseko.
Idla ngokuguqulelwa ngokuthi "umgca." Kwaye iguqulelwe ukuba ithetha "ivenkile" okanye "igumbi lokugcina."
I-Vijnana kukuqaphela okanye kukuqonda, kwaye yile yesihlanu kwiSikhranshi ezintlanu . Nangona idla ngokuguqulelwa ngokuthi "ingqondo," akusikho ingqondo kwisimo esiqhelekileyo segama lesiNgesi. Imisebenzi yengqondo efana nokuqiqa, ukuqonda okanye ukwakha izimvo yimi sebenzi yezinye i-skandhas.
I-Alaya-vijnana, ngoko, ibonisa inkcazo yolwazi. Ingaba kukho into enjengeyiphi i-psychology yasentshona ibiza "i-subconscious"? Akunjalo, kodwa njenge-subconscious, i-alaya-vijnana inxalenye yengqondo egcina izinto ngaphandle kwesaziso sethu. (Qaphela ukuba abaphengululi baseAsia bacebisa i-alaya-vijnana malunga neenkulungwane ezili-15 ngaphambi kokuzalwa kukaFrud.)
I-Alaya-vijnana yiyona yesibhozo yamanqanaba asibhozo owaziyo ngeYogacara , ifilosofi yaseMahayana echaphazelekayo ngokubhekiselele kwimeko yamava.
Kule ngongoma, i-vijnana ibhekisela ekuqaliseni ukuba inqamana neso sikhundla sobunzima ngento ethile. Kukwazisa okudibanisa iso kwimbono okanye indlebe kwisandi.
I- alaya -vijnana isiseko okanye isiseko sazo zonke iingqalelo, kwaye iqulethe ukubonakala kwazo zonke izenzo zethu ezidlulileyo. Ezi mpawu, i- sankhara , ifom ye- bija, okanye "imbewu," kunye nale mibewu, iingcamango zethu, izimvo, iiminqweno kunye neziqhotyoshelweyo zikhula.
I-alaya-vijnana yakha isiseko sobuqu bethu.
Ezi mbewu zichongwe njengembewu ye-karma. I-Karma idalwe ngokusisiseko ngeenjongo zethu kwaye senza ngokusisigqibo sethu, ilizwi kunye nezenzo. I-karma yenziwe ngoko kuthiwa ihlala kwi-subconscious yethu (okanye, i-storehouse consciousness) de ivunise, okanye ide ipheliswe. Izikolo ezininzi zeBuddhism zinika uluhlu lweendlela kunye neendlela zokuphelisa i-karma eyingozi, njengokwenza izenzo ezintle okanye ukuhlakulela i-bodhicitta.
Abaphengululi baseYogacara bacebisa ukuba i-alaya-vijnana yayiyi "sihlalo" sikaBuddha Nature , okanye i- tathagatagarbha . UBuddha Nature, ngokuyisiseko, yinto ebalulekileyo yazo zonke izidalwa. Kungenxa yokuba siyi-buddha esisisiseko esiyikwazi ukuyiqonda uBuddha. Kwezinye izikolo zeBuddha, iBuddha Nature iyaqondwa ukuba ikhona njengento enjengembewu okanye inokwenzeka, ngelixa kwabanye sele lizalisekile kwaye likhona nangona singazi. UBuddha Nature ayikho into esinayo, kodwa sinjani.
I-alaya-vijnana ke ke, indawo yokugcina yonke into "kuthi," yingozi kwaye inenzuzo. Kubalulekile ukuba ungacingi nge-alaya-vijnana njengoluhlobo lwaloo nto, nangona kunjalo.
Kufana nokuqokelela kweempawu esiziphosa ngazo. Yaye njengengqondo engacatshulwayo ephakanyiswe yingqondo yesimanje, iziqulatho zengqolowa yolwazi zigcina izinto zethu nezindlela esizifumana ngayo ubomi bethu.
Ukudala Ubomi Bakho
Imbewu ye- bija ifuthe kwindlela esiziqonda ngayo nakwezinye izinto. Thich Nhat Han ubhale kwiNtliziyo yeBuddha's Teaching (i-Parallax Press, ngo-1998, umz. 50):
"Umthombo weembono zethu, indlela yethu yokubona, uhlala kwi-store yethu conscious." Ukuba abantu abalishumi bajonge ifu, kuya kuba nemibono yeshumi eyahlukileyo kuyo, nokuba ingaba iyabonwa njengenja, isando okanye isambatho ixhomekeke engqondweni yethu-ukudabuka kwethu, iinkumbulo zethu, umsindo wethu. Iimbono zethu zithwala zonke iimpazamo zokuzithoba. "
EYogacara, kuthiwa i-vijnana - ukuqonda - yinyani, kodwa izinto zokuqonda azikho.
Oku akuthethi ukuba akukho nto ikhona, kodwa akukho nto ikhona njengoko siyiqonda . Imibono yethu yezinto eziyinyani yindalo ye-vijnana, ngakumbi i-alaya-vijnana. Ukuqonda oku kukuqala kobulumko.
Ukuguqulwa kweZilwanyana eziLungileyo kwiZiko ezili-10 ezilula
Amagama amaninzi amaMuslim kumantombazana
Iimpawu ezintle zeNtshonalanga zeAsatru